mogozay.com ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အားအသုံးမပြုခင် ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သေချာစွာဖတ်ရှုပါ။ ဤစည်းကမ်းများကိ၂၀၀၄ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံအင်တာနက်အသုံးပြုမှု ဥပဒေအရ ပြဌာန်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖော်ပြချက်များကို ကွန်ပြူတာစနစ်ဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးအခြားစာရွက်စာတမ်း (သို့မဟုတ်) ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်များ ပါရှိရန်မလိုအပ်ပါ။
mogozay.com ၀က်ဘ်ဆိုဒ် (the "Site") မှကြိုဆိုပါသည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှာ ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်နှင့် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ခွဲများ၊လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ၊အခြားမီဒီယာများနှင့်ပါတနာဝက်ဘ်ဆိုဒ်များအားလုံးတို့တွင် အကျုံးဝင်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်အား အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သင်လက်ခံနားလည်သည်ဟု သဘောသက်ရောက်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ စည်းမျဉ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ အချိန်မရွေးလိုအပ်သလို ပြောင်းလဲနိုင်ခွင့်ရှိပြီး ကြိုတင်အသိပေးစရာမလိုဘဲ ပြောင်းလဲသည့်အချိန်မှစ၍ အကျုံးဝင်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသစ်များကို အမြဲဖတ်ရှုရန် အကြံပေးလိုပြီး ပြောင်းလဲသည့်အချိန်တွင် သင်ဆက်လက် အသုံးပြုနေခြင်းဖြင့်အပြောင်းအလဲများကို လက်ခံနားလည်ကြောင်း မှတ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်၏ သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန်သဘောတူညီခြင်းမရှိလျင် အသုံးပြုသူအဖြစ် စာရင်းပေးသွင်းခြင်းမပြုလုပ်ဘဲ ထွက်ခွာနိုင်ပါသည်။ ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်အား MOGO COMPANY LIMITED ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။
အပိုဒ် (က) သင်၏အကောင့်
သင့်အားဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အချို့လိုအပ်ပါသည်။ ကွ်ျနုပ်တို့ဘက်မှ သင်၏အချက်အလက်များ မစစ်မှန်ဟုယူဆပါက ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ သင်၏အကောင့်နှင့် ပတ်စ်ဝေါ့များကို ဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုသို့ဖျက်သိမ်းမှုအတွက် ကွ်ျနုပ်တို့ဘက်မှ မည်ကဲ့သို့သော တာဝန်ယူမှုမျိုးကိုမှ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ပတ်စ်ဝေါ့များ အကောင့်အချက်အလက်များကို သင်ကိုယ်တိုင် မပေါက်ကြားအောင် ထိန်းသိမ်းရမည် ဖြစ်သည်။ တစ်စုံတယောက်က သင်၏အကောင့်အားခိုးယူသုံးစွဲခြင်း၊ အလွဲသုံးခြင်း ပြုလုပ်ပါက သင်၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။ ထိုကဲသို့ဖြစ်ပွားပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ချက်ခြင်း အကြောင်းကြားပေးရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုဖြစ်ပွားမှုအတွက် သင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရပ်တန့်မည်ဖြစ်ပြီး ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် သင့်ဘက်ကသာ တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိထားရမည်ဖြစ်သည်။
ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ရှိ ၀န်ဆောင်မှု နှင့် စပ်ဆက်ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက သင်၏ ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက်များကို စာရင်းသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ တိကျမှန်ကန်သော အချက်အလက်များကိုသာ ဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး အပြောင်းအလဲတစ်စုံတရာရှိပါက ချက်ချင်း ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်အကောင့်အချက်အလက်များနှင့် password များကို လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းထားရှိရန်မှာ အသုံးပြုသူ၏တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်အကောင့်၊ password နှင့်ဆောင်ရွက်ပြုမူသမျှ ကိစ္စအားလုံးမှာ အကောင့်ပိုင်ရှင်တွင်သာ တာဝန်ရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင်၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ သင့်အကောင့်နှင့်password ကို အသုံးပြုခြင်းမျိုး ရှိလာခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးရပါမည်။ အထက်ပါဖော်ပြချက်များအား ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့လျှင် ထိုသို့အလွဲသုံးစားမှု တစ်စုံတရာ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ၀က်ဘ်ဆိုဒ်နှင့် တိုက်ရိုက် (သို့) သွယ်ဝိုက် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိ၍ မည်သည့်တာဝန်ယူမှုမျိုးမှ ဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးလိုပါသည်။
အပိုဒ် (ခ) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အားအသုံးပြုရာတွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကိုဖတ်ရှုထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင်ဖြည့်သွင်းထားသောသင်၏အချက်အလက်နှင့် အသုံးပြုထားသော အကြောင်းအရာများကို အလွန်အမင်း လျှို့ဝှက်ထားမည်မဟုတ်ဘဲ အထက်ပါ အချက်အလက်များအတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သဘောတူညီခြင်းမရှိပါက ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသည်။
အပိုဒ် (ဂ) ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံ
ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်အားအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အတွင်း ဖော်ပြထားသောဈေ၊ငွေချေစနစ်များဖြင့် ဈေးဝယ်နိုင်မှုကို သင်သိရှိနားလည်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ဆိုဒ်၏ ငွေချေစနစ်ကို ထောက်ပံထားသော ကြားခံကုမ္ပဏီကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိသည်ကိုလည်း နားလည်ရပါမည်။ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း ရောင်းချခြင်းပြုလုပ်ရာတွင် အွန်လိုင်းမှငွေပေးချေမှုများကို သင်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှိ ရောင်းချသူအကြား၌သာ ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။
အပိုဒ် (ဃ) ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အားအသုံးပြုခြင်း
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အားအသုံးပြုရာတွင် လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန်နှင့် အမှားအယွင်းမရှိစေရန် ကြိုးစားပါမည်။ သို့သော် အင်တာနက်လိုင်းနှင့် အခြားပြသနာများကြောင့် တစ်ခါတရံ အသုံးပြု၍ မရခြင်း သင်၏အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ကြည့်ရှု၍ မရခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ အဆင်ပြေရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
အပိုဒ် (င) ဆိုဒ်အားအသုံးပြုခွင့်
ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်အား ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု အသုံးပြုသူသည် အနည်းဆုံး အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီး ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုထက်ငယ်ရွယ်သူများအနေဖြင့် မိဘ(သို့)အုပ်ထိန်းသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်အားအသုံးပြုသူအနေဖြင့် ဈေးဝယ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်း အသုံးပြုခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲကိုယ်ပိုင်အကျိုးအမြတ်အတွ က်သုံးခြင်း၊အခြားကြော်ငြာလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုခြင်းကို တားမြစ်ထားပါသည်။ အကယ်၍ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်း လိုက်နာခြင်း မရှိပါက အသုံးပြုသူအား ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ အသုံးပြုခွင့်ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ရှိ အကြောင်းအရာများအားလုံးမှာ သတင်းအချက်အလက်ပေးရန်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းဖော်ပြချက်များအားလုံးမှာ ရောင်းချသူများထံမှ အချက်အလက်များသာဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင် မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း အညွှန်းနှင့်အကြံပေးချက်များမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် ထင်မြင်ချက်များမဟုတ်ဘဲ အကိုးအကားများသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အား သင့်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ရန် ခွင့်ပြုချက်ပေးထားသော်လည်း page caches များနှင့်တကွ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုအားကူးယူခြင်း၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖော်ပြခြင်းများ ပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါ။ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာများ၊ဈေးနှုန်းများစသည်တို့ကို ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွင် အသုံးပြုရန် ရည်ရွက်ချက်ဖြင့် မည်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲအကူအညီနှင့်မှ ကူးယူခြင်း ပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုလုံးနှင့် မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမှမဆို ခွင့်ပြုချက်မရဘဲစီးပွားရေးသဘောအရ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ကူးယူခြင်း၊ရောင်းချခြင်းများပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါ။ ခွင့်ပြုဘက်မရရှိဘဲ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ အမှတ်တံဆိပ်၊ အခြားအချက်အလက်များ (ပုံများ၊စာများ၊စာမျက်နှာဒီဇိုင်းများ၊ဖောင်များ၊meta tagsများ) တို့ကို အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ။ အထက်ပါစည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ခဲ့ပါက သင်၏အကောင့်အားချက်ခြင်း အသုံးပြုခွင့်ရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုပြင်းထန်သော ကိစ္စများအတွက် တရားဥပဒေနည်းလမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၁။ ဖော်ပြထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာမှုမရှိခြင်း ၂။ အခြားတစ်စုံတစ်ယောက်အဖြစ် ဟန်ဆောင်အသုံးပြုခြင်း၊ မှားယွင်းသောအချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေခြင်း ၃။ တရားမဝင်သော ရည်ရွက်ချက်တစ်ခုခုဖြင့် အသုံးပြုခြင်း ၄။ ခွင့်မပြုထားသော ဒေတာဘေ့စ်နှင့်စနစ်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် ကြိုးပမ်းခြင်း ၅။ အခြားအသုံးပြုသူများအား စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးခြင်း ၆။ မြန်မာနိုင်ငံ ပြဌာန်းဥပဒေအရ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော ပစ္စည်းများကိုဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ကြော်ငြာခြင်း၊ဖော်ပြခြင်း ၇။ ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် စနစ်ပျက်ယွင်းစေမည့် အခြားဆော့ဖ်ဝဲများကို တင်ရန်ကြိုးပမ်းခြင်း၊ ၈။ အင်တာနက်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သော အခြားအကြောင်းရာများ ပြုလုပ်ခြင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
အပိုဒ် (စ) စီမံခြင်း
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အား နှောက်ယှက်ခြင်း၊ ဖျက်စီးရန်ကြိုးပမ်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ ဝန်ထမ်းများ၊ အကျိုးဆောင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နှင့် အခြားတိုက်ရိုက် (သို့မဟုတ်) သွယ်ဝိုက်ပတ်သက်နေသူများအား ထိခိုက်စေမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများဖြစ်ပွားပါက ဥပဒေနည်းအရ သင့်ထံတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
၁။ ရာဇဝတ်မှုပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းခြင်း၊ တရားမဝင်သုံးစွဲခြင်း ၂။ သင်မပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်း၊ နှောက်ယှက်စော်ကားခြင်း (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ဘာသာရေး၊မဟုတ်မမှန်သတင်းဖြန့်ခြင်း၊ကိုယ်ထိလက်ရောက်ထိခိုက်စေခြင်း) ၊ စသည့်မည်သည့် ကျူးကျော်စော်ကားမှုမျိုးကိုမှ မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးစေမည့် စာများ၊ အပြုအမူများ၊ အခြားနိုင်ငံများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ပျက်ပြားစေမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ခြားမှုများ၊ spam များဖြန့်ပွားခြင်း အစရှိသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းများ ခွင့်မပြုပါ။ ၃။ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း ၄။ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ယူဆခြင်း
အပိုဒ် (ဆ) ထည့်သွင်းချက်များ
သင်ပေးထားသောအချက်အလက်အားလုံး၊ (သုံးသပ်ချက်၊ ဝေဖန်အကြံပြုချက်များ) မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး သင့်အားပြန်လည်ပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုအချက်အလက်များကို သင်၏နာမည်နှင့်တကွ ဝက်က်ဘ်ဆိုဒ်၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ဖော်ပြနိုင်သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ်မဟုတ်သော အခြားသူအယောင်ဆောင်မေးလ်ဖြင့် ဝင်ရောက်ရေးသားခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။ ထိုအကြောင်းအရာများကို သင့်အားအကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ အချိန်မရွေးပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
(က) အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ခြင်း
mogozay.com သည် ကုန်ပစ္စည်းပေါင်းများစွာကို တစ်နေရာတည်းတွင် ရောင်းချနေသည့် အွန်လိုင်းရှော့ပင်းမောလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီနှင့် မှတ်ချက်များကို အသေးစိတ်စစ်ဆေးသော်လည်း လွတ်သွားသည့်အချက်အလက်များ ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ တစုံတခု အမှားအယွင်းရှိပါက ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှ ဖယ်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းသည့် တစုံတခု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်းစာသားများ၊ လူမျိုးရေး ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး တယူသန်ပြောဆိုထားမှုများ၊ ရိုင်းစိုင်းသည့်အသုံးအနှုန်းများ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည့်စာသားများ၊ လိမ်လည်ဖျားယောင်းမှုများ၊ ဆဲရေးတိုင်းထွာမှုများ၊ ရုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းသည့်အသုံးအနှုန်းများ၊ မဖွယ်မရာစကားများ၊ လောင်းကစားလုပ်ဆောင်ခြင်းများ၊ အမျိုးသားရေးစည်းလုံးညီညွတ်မှု လုံခြုံစိတ်ချရမှုတို့ကို ထိခိုက်စေသည့် အကြောင်းအရာများ၊ နိုင်ငံ၏အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးစေသည့် အသုံးအနှုန်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေသည့် စာသားများ၊ ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်သည့် အသုံးအနှုန်းများ၊ သို့မဟုတ် ဆော့ဝဲလ်ဗိုင်းရပ်ပါဝင်ခြင်းစသည်တို့ကို တွေ့မြင်ပါက ကျွန်တော်တို့ကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ သေသေချာချာပြန်လည်စစ်ဆေး၍ မသင့်တော်သည်များကို အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ပြန်လည်ဖြုတ်ချပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိ မသင့်တော်သည့် အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းကြားပေးသည့်အခါ နာမည်၊ ဖုန်းနံပတ်၊ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာအတိအကျ၊ ကန့်ကွက် ဖယ်ရှားလိုသည့်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သက်သေ သာဓကနှင့်တကွ ပေးပို့ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် မပြည့်စုံပါက တရားဝင်အကြောင်းကြားချက်ဟု သတ်မှတ်မည်မဟုတ်သည့်အပြင် တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးသွားမည်မဟုတ်ပါ။
(ခ) စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို ချိုးဖောက်သည့် အရေးအသားများအတွက် အခိုင်အမာပြောဆိုခြင်း
ကျွန်တော်တို့ဘက်မှ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားသူများ၏ ကိုယ်အား ဥာဏ်အားကို အစဉ်အမြဲလေးစားလျက်ရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင့်မူပိုင်ခွင့်ကို တနည်းနည်းဖြင့် ထိခိုက်စေခြင်းမျိုးရှိလာပါက ကျွန်တော်တို့ထံကို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဘက်မှ လုံလောက်သည့်အချိန်အတွင်း တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ မူပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းကြားပေးသည့်အခါ နာမည်၊ ဖုန်းနံပတ်၊ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာအတိအကျ၊ မူပိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သက်သေ သာဓကနှင့်တကွ ပေးပို့ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် မပြည့်စုံပါက တရားဝင်အကြောင်းကြားချက်ဟု သတ်မှတ်မည်မဟုတ်သည့်အပြင် တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးသွားမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ပြင် မမှန်ကန်သည့် သတင်းအချက်အလက်များဖြစ်ပါက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် ထိခိုက်စေခြင်းဟု ယူဆသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဥပဒေအရ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
mogozay.com တွင် ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချခြင်း၊ တဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း သဘောတူညီမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထုတ်လုပ်သူ၏ အခွင့်အရေးကို အမြဲအလေးထားလျက်ရှိသည်။ သို့သော် ၎င်းသဘောတူညီမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာတစုံတရာရှိလာပါက မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ခြင်းတွင် အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပေ။ ယင်းသဘောတူညီမှုများအတွက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ဖြန့်ချိသူ သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရောင်းချသူတို့နှင့်သာ သက်ဆိုင်၍ mogozay.com မှ ၎င်းအချင်းအရာအတွက် တစုံတရာဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်တော်တို့ဘက်မှ ဥပဒေအရကန့်သတ်ထားသည့် အကြံပြုချက်များ၊ လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးသွားမည်မဟုတ်သည့်အတွက် မေးခွန်းတစုံတရာရှိလာပါက ဥပဒေဘောင်အတွင်းကသာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန် လိုပါသည်။
(ည) ကုန်သွယ်မှုအမှတ်အသားနှင့် မူပိုင်ခွင့်များ
mogozay.com, Shop logo, Shop logo ဒီဇိုင်း MOGO, Shop, Shop Fashion စသည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် တင်ထားသည့် လိုဂိုအမှတ်အသားများသည် သက်ဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်တင်ပြီးသော အမှတ်အသားများဖြစ်သည်။ လိုဂို၊ page headers, button icons, အက္ခရာစာ၊ ဝန်ဆောင်မှုအမည်နာမများကို ကျွန်တော်တို့နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် အခြားတစ်ဖက်ဖက်ကူးယူသုံးစွဲခြင်း၊ ဈေးဝယ်သူများကြားတွင် မရှင်းမလင်းဖြစ်စေရန်နှင့် ကုမ္ပဏီနာမည်ကျဆင်းစေရန် တမင်ရည်ရွယ်သုံးစွဲခြင်းမျိုးကို ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် အသုံးပြုထာသည့် လိုဂိုအမှတ်တံဆိပ်များသည် ကျွန်တော်တို့နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အမှတ်အသားများဖြစ်သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဒီဇိုင်း၊ စာသား၊ ဆော့ဝဲလ်၊ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ သီချင်း၊ အသံနှင့် အခြားမှတ်ပုံတင်ထားပြီး သို့မဟုတ် မှတ်ပုံမတင်ထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များအားလုံးသည် ကျွန်တော်တို့၏ မူပိုင်ခွင့်အောက်တွင်သာ ရှိနေသောအရာများဖြစ်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုလုံးကို မြန်မာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနှင့် နိုင်ငံတကာထုံးတမ်းစဉ်လာမျာ
We reserve the right to make changes to the website, its policies, these terms and conditions and any other publicly displayed condition or service promise at any time. You will be subject to the policies and terms and conditions in force at the time you used the website ujanless any change to those policies or these conditions is required to be made by law or government authority (in which case it will apply to orders previously placed by you). If any of these conditions is deemed invalid, void, or for any reason unenforceable, that condition will be deemed severable and will not affect the validity and enforceability of any remaining condition.
These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of the the Republic of the Union of Myanmar. You agree, as we do, to submit to the exclusive jurisdiction of the courts in Yangon.
3. Conditions Of Sale (Between Us And Customers)
Please read these conditions carefully before placing an order for any products with the Sellers (“We” or “Our” or “Us”, wherever applicable) on the website. These conditions signify your agreement to be bound by these conditions.